Home Wararka oo lagu soo eedeeyay KUFSI & Jir dil uu ka geystay...
[Daawo – Kullane Jiis] oo lagu soo eedeeyay KUFSI & Jir dil uu ka geystay Gobolka Gedo
Cabdullaahi Kullane oo loo yaqaan (JIIS MARIIXAAN) ayaa lagu soo eedeeyay tacadiyo isugu jira jir dil iyo kufsi uu ka geystay gobolka Gedo.
Qaar ka mid ah haweenka loo geystay tacadiyada oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in amarka Kullane Jiis lagu soo qabqabtay kaddibna loo geystay jir dil iyo kufsi.
Haweenka ayaa ka codsaday Dowladda Federaalka in caddaaladda la hor keeno Kullane Jiis. Waxaa isa soo taraya shacab badan oo ku dhaqan gobolka Gedo oo ka hadlaya tacadiyada ka dhacay Gobolka taasoo aay ku eedeeyeen Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo iyo wakiilkiisa Gobolka Gedo Cabdullaahi Kullane Jiis Mariixaan.
Tani ayaa, sida ay qeybtood sheegeen, waxay ku dhiiradeen kadib markii xilka laga qaadey Cabdullaahi Aadan Kulane, sarkaal awood badan oo gacansaar la leh madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Sida laga soo xigtay sheegashooda, amaro uu bixiyey Kulane ayaa tacadiyo isugu jira dhac, kufsi, barakicin qasab ah iyo jirdil loogu geystay rayid ku dhaqan magaalooyinka ay ciidamada dowladda sida xoogga uga qabsadeen gobolkaas.
Dhanka kale, dhinacyadda la eedeeyay ayaan wali iska difaacan sheegashooyinkan. Isku dayo xiriir oo lala sameeyay darafyadda lana doonayey in wax looga waydiiyo ayaan guuleysan.
Mid kamid ah haween, oo magaceeda ku sheegta Farxiyo Maxamed kuna nool Doolow, Gedo, Soomaaliya, ayaa daaha ka rogtay in magacyadda saraakiisha ku lugta leh “xadgudubyadan” oo ay doonayaan in sharciga la mariyo.
“Inta jeer ee habeen madow guriyaheena nagala saarey lama soo koobi karo. Waxaa jiro gabdhaha xataa la kufsadey. Askartaas tirada badan ninka wadday wuxuu xiriir la sameynaayey taliyaha xasilinta gobolka [Gedo], Bakaal Kooke isagana waxaa telefoonka kasii hagagey ninka hadda xilka laga qaadey ee Kulane-Jiis. Ra’iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa ninkaas uu xilka ka qaadey in uu sharciga noosoo istaajiyo,” ayay tiri.
Bishii September, 2019-kii, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, ayaa ka dhawaajiyay in ay maxkamadda ICC u gudbinayaan dacwad ka dhan ah Farmaajo “sababo ku aadan jariimooyinka uu kula kacay shacabka Jubaland”.
Hardanka 16-ka kursi ee Gedo
Dhamaadkii 2019-kii ayuu maamulka Farmaajo bilaabay in uu ciidamo ku daabulo gobolkadda Gedo. Qorshaha waxaa la sheegay in uu ahaa in uu ka madax-banaaneeyo Jubaland oo ay ku fashilmeen in ay isbedel ka sameeyaan.
Askartaas dowlada Turkiga u tababartay la dagaalanka Al-Shabaab ayaa mucaaradku sheegay in la isku dayay in lagu boobo 16-ka kuraas ee taala gobolkaas si ay Farmaajo dib loogu doorto. Balse, waa riyo u muuqata in aysan rumoobin.
Hooyo kale oo muuqaalka kasoo muuqatay waxay ra’iisul wasaaraha xilgaarsiinta Rooble ka codsanaysaa in uu si deg-deg ah talaabo uga qaado Kulane iyo shaqsiyaadka kale ee ku heliyey “dhibaatooyinka ee shacabka lagula kacay”.
Iyadda oo ay muuqato in la xaliyey ama isu-soo-dhowaanshiyo ka jirto is-mari-waaga siyaasadeed ee gobolka Gedo kaasoo daahiyey doorashooyinka, Rooble waxaa hortaala u cadaalad falida rayidka lagu dulmiyey magaca dowladda dhexe.
Cabdullahi Kullane Jiis ayaa sidoo kale loo haystaa kiiska Gabar ka tirsaneyd hay’adda NISA oo la la’ayahay muddo ka badan bil, waxaana la rumeysan yahay in uu isaga ahaa shaqsigii bixiyay amarka lagu afduubtay Ikraan oo aan la ogeyn meel aay ku danbeysay, iyadoo loo badaniyaayo in la dilay meydkeedana la tuuray.
Halka hoose ka daawo.
Previous articleNISA oo loo heystay kiiska Ikran oo haddana loo xilsaaray in aay Baarto [Sababta?]
[Xog] Guddigii Doorashooyinka Farmaajo oo lakala diray
Qoor-Qoor oo xalay isku dayay in uu isku geeyo Shiikh Sharif...